Ogow 10 xiddig oo soo maray academy-ga Man Utd oo wanagsanaaday markii ay ka tageen Old Trafford | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Ogow 10 xiddig oo soo maray academy-ga Man Utd oo wanagsanaaday markii ay ka tageen Old Trafford
Himilo – Manchester United waa mid ka mid ah kooxaha ugu weyn, laakiin kuwa ka yimid akadeemiyadooda ma dammaanad qaadayaan guusha.
In kasta oo United ay leedahay taariikh hodan ah oo ku saabsan kor u qaadida ciyaartoydooda da’yarta ah si ay ugu sii wataan guul badan oo ka mid ah kooxda koowaad, ciyaartoydu waxay ku qasban yihiin inay ku wareegaan meelo kale.
Fasalka United ee 1992-kii waa tusaalaha ugu fiican, sida koox dhalinyaro ah oo da ‘yar ah oo United u horseeday hanashada Premier League.
Waxaan eegayna ilaa 10 ciyaartoydii hore ee akadeemiyada United oo ka iftiimay meel kale.
Pogba ayaa ku soo biiray akadeemiyada United ee uu ka soo muuqday Le Harve sanadkii 2009, laakiin bixitaankiisa 2012, ninka reer France helay saddex fursadood oo kooxda koobaad ah.
Sir Alex Ferguson ayuu ku eedeeyay bixitaankiisa, isagoo si xor ah ugu dhaqaaqay Wakiilka weyn ee Pogba Mino Raiola.
Sikastaba, Pogba ayaa si cajiib ah ugu ciyaaray kooxda Juventus taas oo ay United go’aansatay inay burburiso rikoorka adduunka si dib ugu soo celiso Old Trafford.
Danny Drinkwaterwali wuxuu kubadkiisa ku ciyaaraa Stamford Bridge, laakiin haatan ma haysto xulashada kooxda waxaana uu amaah kula joogaa kooxda Championship-ka ee Reading.
Drinkwater waa laga yaabaa inuu macquul yahay, isagoo ka fikiraya waqtiyo ka fiican Leicester City markii uu muddo kooban ahaa mid ka mid ah qadka dhexe ee ugu fiican England.
Xiddiga reer England ayaa udub dhexaad u ahaa guushii Claudio Ranieri ee 16/17, laakiin waxa uu markii hore u dhaqaaqay Leicester ka dib markii United laga tuuray.
Drinkwater wuxuu toban sano ka badan ku qaatay United isagoon ka soo muuqan koox kooxda koowaad.
Wuxuu ku dhashay Stockport, Michael Keane ayaa muddo ka badan toban sano ku qaatay Manchester United, oo ay ku jiraan afar xilli uu qeyb ka ah kooxda koowaad.
Si kastaba, Intii lagu guda jiray waqtigiisii United, Keane ayaa kaliya ku guuleystay hal kulan oo Premier League ah.
Waxa uu si amaah ah ugu dhaqaaqay kooxda Burnley si uu uga tago Keane inuu qaabkiisa ku helo, ka dib si joogto ah ayuu ugu dhaqaaqay waxaana uu ku jiray liiskii ciyaaryahanada da’da yar ee PFA 2017(Young PFA Player of the Year.).
Keane ayaa haatan joogto ka ah wadnaha daafaca kooxda Everton, waxaana England uu ka helaa booskiisa.
United ayaa qarash gareysay 2004 markii ay xaqiijiyeen adeega 17 jirka Gerard Pique ee ka yimid kooxda Barcelona.
Pique wuxuu waqti kooban ku qaatay akadeemiyada laakiin wuxuu ku jiray sawirka kooxda koowaad in kasta oo ay midoobeen isgaarsiinta difaac ee United ee Nemanja Vidic iyo Rio Ferdinand.
Waxaan galay xafiiska Sir Alex Ferguson, Waxaan daacad u ahaa isaga,” Pique ayaa markii dambe ku qoray Players Tribunal.
“Waxaan idhi, ‘idhagayso, waxaan dareemayaa inaan lumiyay kalsoonidaada. Barcelona waa gurigeyga. Waxaan doonayaa inaan dib ugu laabto’.”
Markii ay United ugu dambeyntii ka jaraysay xiriirka Tom Heaton sanadkii 2010, in yar ayaa u maleysay lix sano ka dib inuu u safto England.
Heaton ayaa ka soo baxay safka dhalinyarada ee United, isagoo Dhowr amaah sameeyay, oo ay ka mid tahay mid gaar ah Belgium Royal antwerp.
Sida Keane, Heaton ayaa runtii cagihiisa ku taagay ka hoos shaqayntii Sean Dyche.
Goolhayaha ayaa ka mid ah kooxda ka ciyaarta inay qeyb muhiim ka noqdeen kooxda Burnley, xitaa wuxuu kasbaday inuu dib ugu laabto United 2021.
Markii Ben Brereton Diaz uu ku sugnaa United wuxuu ahaa darajooyinka United, laakiin uu ku ogaanayo in uu ka bedelo gooldhalinta xulka Chile.
Laga soo bilaabo da’da 7 ilaa 14 wuxuu la joogay Manchester United,
Sikastaba, United ayaa ku guuldareysatay inay aragto kartida ninka da ‘yarta ah, waxaana dhaqso loogu qaatay akadeemiga markii uu ku laabtay kooxda Stoke City.
Brereton Diaz ayaa dhaliyay 13 gool 17 kulan uu u saftay Blackburn Rovers inkastoo uu ka soo ifay heerka caalami ee Chile.
Jack Harrison wuxuu xaqiiqdii qaaday waddooyinka ku saabsan xirfadda kubbadda cagta.
Harrison ayaa ka hooseeyay Marcelo Bielsa ee Leeds United, Laakiin wuxuu ku bilaabay nolosha Merseyside, ee Liverpool.
Sikastaba, ka dib hal sano oo uu ka dhacay akadeemiga Liverpool, Harrison ayaa u dhaqaaqday United, halkaasoo uu ku qaatay 7 sano.
Harrison wuxuu ka dhigay inuu u wareego Mareykanka,wuxuuna ahaa kii ugu horreeyay ee ka mid ah MLS Superdraft 2016 ka hor inta aysan Manchester City u wacan. balse hadda waa xiddig Leeds United,ah.
Giuseppi Rossi ayaa ka mid ahaa weeraryahanada ugu fiican ee qarnigiisii, talyaanigan ayaa si joogto ah uga sii waday gool dhalinta kooxaha Villarreal iyo Fiorentina.
Sikastaba, xirfadiisa Rossi ayaa si aad ah u sii bandhigay si ka duwan sidii uu ku ahaa United.
Rossi ayaa ku riyooday safashadiisii ugu horreysay ee United, sida Pique uu waqti kooban ugu qaatay da ‘yarta ka hor inta uusan bedelin Ruud van Nistelrooy wuxuuna shabaqa soo taabtay kulankii Sunderland.
Qofka la illoobay ee ka midka ahaa fasalkii 1992-kii , Robbie Savage wuxuu ka bilaabay nolosha dhalinyarada United.
Si ka duwan taariikhdiisa , Savage lama siin fursad kooxda koowaad ka jirta United, wuxuuna u dhaqaaqay Crewe Alexander sanadkii 1994.
Dhaqaaqistaas ayaa bilaabay inuu ka soo baxo mustaqbal safar oo arkay inuu matalayo Blackburn, Derby, Birmingham iyo kuwa kale.
Wiilka Savage, Charlie Savage, ayaa hadda ku jira akadeemiyada United.
Mid ka mid ah ciyaartoydii ugu weynaa ee City ayaa ka bilaabay nolosha United.
Goater, oo ku dhashay Bermuda, waxaa arkay indha indheeyayaal United waxaana loo soo gudbiyay England1988.
Waxay ku qaadatay guater kaliya hal xilli si uu ugu qasbo inuu ka mid noqdo kooxda koowaad, laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu kasoo muuqdo dhinaca Sir Alex Ferguson, waana uu sii daayay.
Previous: Taariiqda Haweeneydii ugu horreysay ee dal african ah madaxweyne loogu doortay
Next: Lix ciyaaryahan oo kubbadda cagta ah oo guursaday boqorada quruxda